चन्द्रमणि भट्टराई | २०७७-०६-२० | २४३३३ २५
ंअनलाइनबाट ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन, अनलाइनबाहेकको विवरण आउन बाँकी
काठमाडौं । असोज १ गतेदेखि १० वटा वडाबाट सुरु गरेर १३ गतेदेखि सबै वडाबाट सञ्चालनमा ल्याइएको अनलाइन राजस्व निर्धारण तथा संकलन प्रणालीबाट अहिलेसम्म ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त भइसकेको छ । यो उपलब्धीले आफूलाई लक्ष्यप्रति थप उत्साहित बनाएको बताउँदै काठमाडौं महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले — यस बर्ष राजस्वमा वृद्धि हुनेमा आशावादी भएको बताउनुभएको छ । प्रणाली सञ्चालन गर्दा कस्ता समस्या देखिए? समस्याको समाधान कसरी भयो? समाधान हुन नसकेको समस्याबाट उत्पन्न जोखिम कस्ता छन्? वडाका अधिकारीको अनुभव सुन्न आयोजना गरिएको छलफलमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । ‘कर्मचारीको क्षमता बिकास गरेर, कर्मचारीले नभ्याएको काम सघाउन बाह्य जनशक्तिको प्रयोग गरेर, इन्टरनेटको क्षमता बढाएर, प्रबिधिमा लगानी बढाएर जे—जे गर्नुपर्छ गरौं । यस अघि करदाताको विवरण कम्प्युटरमा नभएकोले शुरुवातमा केही असजिलो देखिएको छ । सबै मिलेर यो असजिलोको सामना गरौं । भोलि कर्मचारीले सेवाग्राहीको भीडमा असिनपसिन भएर काम गर्नू पर्दैन । करदाताले धाएर महानगरमा पुग्नु र भीडमा बसेर पैसा तिर्नु पर्दैन । पैसा तिर्ने नागरिकलाई सुबिधा दिएर पैसा लिउँ ।’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको भनाइ थियो ।
प्याकेजिङ् खाद्यबस्तुको खोलमा भएको मिति हातैले मेटिन्छ Previous Post
मेयर शाक्यबाट निर्माणाधीन पार्कहरुको अवलोकन ः चावहिल चोकमा निर्माण भएको आकाशे पुल शुभारम्भ Next Post